Indlela yokwakha abalinganiswa boncwadi | Uncwadi lwangoku
Omnye wemisebenzi enzima kakhulu ajongene nayo umbhali, ngakumbi ukuba ungumntu omtsha, kukudalwa kwabalinganiswa bebali lakhe (ibali, inoveli, intsomi, ...). Ekudalweni kwezi, unxibelelwano lwabo kunye nobuntu ababunikayo ebalini, kuya kuxhomekeka ekubeni banxibelelana ngakumbi okanye kancinane kuhlobo oluthile lokufunda okanye olunye.
Ukwenza le nxalenye yenkqubo yokuyila ibelula kancinci, okanye ubuncinci uzame, siza kukunika uthotho lwe tips neengcebiso ngendlela yokwakha abalinganiswa boncwadi ezisebenza kwibali lakho. Qhubeka ufunda, siza kuzityhila apha ngezantsi.
Iingcebiso kunye neengcebiso zokulandela
Ukuba ungumbhali kuya kufuneka ubenoxanduva, umfundi olungileyo, ke, zibeke ezihlangwini zalo mfundi ukuya kufunda umsebenzi wakho. Ngaphambi kokudala inoveli, kumanyathelo okuqala ayo, kuya kufuneka uphinde ucinge ukuba yeyiphi incwadi yabaphulaphuli eya kujolisa kuyo. Sinika umzekelo ocacileyo: ukuba inoveli yakho yolutsha, kuya kufuneka wenze abalinganiswa abatsala umdla walolu hlobo lwabaphulaphuli (abakwishumi elivisayo, abalinganiswa abathandekayo, abantu abanxaxhileyo, abaneengxaki zokufikisa, njl.
Abalinganiswa bakho kufuneka banomdla, nokuba zilungile okanye zingoozwilakhe. Ukuba udala umlinganiswa onomdla ngaphandle kwendawo, enehhuku, ayinamsebenzi ukuba ngoyena mntu ungoyena mntu ubalaseleyo okanye onomtsalane, oya kuthi ekugqibeleni athande umfundi.
Kuya kufuneka wenze ewe okanye ewe kuye abalinganiswa yesibini ezingabalulekanga kangako njengezona ziphambili okanye eziphambili kodwa ziyalincedisa ibali lakho. Ungadlala nabo ukubalisa ibali elinye ukusuka kwiinguqulelo ezahlukeneyo usebenzisa aba bantu, yinto abayithandayo kakhulu.
Ukususela ekuqaleni, ngaphambi kokuqala inoveli yakho, kufuneka uqiniseke ngomlinganiswa ophambili, kodwa akubalulekanga kangako ukuba nabalinganiswa besibini, okanye ubuncinci, hayi bonke ... Njengoko ubhala ibali unokwenza abalinganiswa abatsha ezihambelana kakuhle nebali lokuqala okanye utshintsho olongezayo.
Iindlela zabo zokuthetha, iindlela zabo zokwenza izinto kufuneka zibe zendalo… Kufuneka ubanike ubomi engqondweni yakho, ukuze banganyanzelwa kodwa ukuba bahlale bendalo kangangoko.
Ungalibali eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyithathele ingqalelo ... Ufunda ukubhala ngokufunda nokubhala kamva. Jonga ezona ngqondi zoncwadi kwaye ufunde kubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ungabakha njani abalinganiswa boncwadi
UCarlo julio molina sitsho
Inkulu kwaye inomdla kakhulu kwisithuba sakho malunga nokwenza abalinganiswa.
Imibuliso efudumeleyo evela eVenezuela.
Phendula u-carlo julio molina
Amabinzana angama-30 nguCervantes noShakespeare wolu Suku lweeNcwadi.